Kumele umhlaba uqaphele i'White Widow' - Kenya | News24
Kumele umhlaba uqaphele i'White Widow' - Kenya
London - Ngemuva kokuthi abenhlangano yamaphoyisa emhlabeni bekhiphe isixwayiso, uthungathwa umhlaba wonke owesifazane waseBrithani owaziwa ngele "White Widow", nekukholakala ukuthi uyiphekula.
Lona usolwa ngokuba yingxenye yalaba abahlasele enxanxatheleni yezitolo eKenya, kwabulawa abantu abaningi.
USamantha Lewthwaite, 29, ukhonza enkolweni yamaSulumane, wayeshade noGermaine Lindsay, owaziwayo ukuthi uyiphekula nowazibulala ngokuziqhumisa ngebhomu washona kanye nabanye abangu-52.
Lesi sehlakalo senzeka eLondon, mhlaka-7 Julayi 2005.
Abe-Interpol bakhiphe isitatimende becelwa yiKenya, bexwayisa umhlaba wonke ngalona wesifazane ongumama wabantwana abathathu.
Kukholakala ukuthi u"White Widow" uqale ukwenza imikhuba yakhe ngoDisemba ka-2011.